စိန်ပွင့်တွေ လှူခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ – Tameelay
စိန်ပွင့်တွေ လှူခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ
စိန်ပွင့်တွေ လှူခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင် နဲ့ ဇေသီဟ
ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ နန္ဒာလှိုင် နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဇေသီဟ တို့ဟာ အလှူအတန်း ရက်ရောသူတွေဖြစ်ကြပြီး
ယခုအခါမှာလဲ စိန်ဖူးတော်ငှက်မြတ်နားတော် တွေမှာ ပူဇော်ရန် စိန်ပွင့် များစွာလှူဒါန်း ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
သူတို့ ရဲ့အလှူမှာ သူတို့တင်မက သူတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့ ကိုဖြိုးမင်းသူ နဲ့ မစန်းယဉ်ဝင်း မိသားစုကလဲ
ကျောက်စိမ်းနဲ့ ပတ္တမြားတွေ ကို စိန်ဖူးတော် ငှက်မြတ်နားတော် အတွက် အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။
နန္ဒလှိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ယခုအချိန်မှမဟုတ်ပါဘူး မင်္ဂလာဆောင်စဉ် အချိန်ကတည်းက
နာဂစ်သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်တဲ့ သူတွေအတွက် မင်္ဂလာဆောင်စရိတ်ကို လှူဒါန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အလှူကို သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေနော်။
ယခုချိန်အထိ အားပေးနေတဲ့ နန္ဒာလှိုင့်ရဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ သူတို့အလှူကို သာဓုခေါ်နိုင်စေဖို့ ဒီသတင်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။
စိနျပှငျ့တှေ လှူခဲ့တဲ့ နန်ဒာလှိုငျ နဲ့ ဇသေီဟ
ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယို သရုပျဆောငျ အကယျဒမီ နန်ဒာလှိုငျ နဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူ ဇသေီဟ တို့ဟာ အလှူအတနျး ရကျရောသူတှဖွေဈကွပွီး
ယခုအခါမှာလဲ စိနျဖူးတျောငှကျမွတျနားတျော တှမှော ပူဇျောရနျ စိနျပှငျ့ မြားစှာလှူဒါနျး ခဲ့ပွနျပါတယျ။
သူတို့ ရဲ့အလှူမှာ သူတို့တငျမက သူတို့ရဲ့ မိတျဆှတှေဖွေဈတဲ့ ကိုဖွိုးမငျးသူ နဲ့ မစနျးယဉျဝငျး မိသားစုကလဲ
ကြောကျစိမျးနဲ့ ပတ်တမွားတှေ ကို စိနျဖူးတျော ငှကျမွတျနားတျော အတှကျ အသုံးပွုရနျ လှူဒါနျးခဲ့ပါသေးတယျ။
နန်ဒလှိုငျတို့ ဇနီးမောငျနှံဟာ ယခုအခြိနျမှမဟုတျပါဘူး မင်ျဂလာဆောငျစဉျ အခြိနျကတညျးက
နာဂဈသဘာဝ ဘေးအန်တရာယျ ကရြောကျတဲ့ သူတှအေတှကျ မင်ျဂလာဆောငျစရိတျကို လှူဒါနျးခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
သူတို့ ဇနီးမောငျနှံရဲ့ အလှူကို သာဓုချေါဆိုနိုငျကွပါစနေျော။
ယခုခြိနျအထိ အားပေးနတေဲ့ နန်ဒာလှိုငျ့ရဲ့ ခဈြပရိသတျကွီးရေ သူတို့အလှူကို သာဓုချေါနိုငျစဖေို့ ဒီသတငျးလေး မြှဝပေေးလိုကျကွပါဦးနျော။
မနက်ဖြန် မြန်မာပြည်သို့ရောက်လာတော့မယ့် ရဲမင်းပိုင်
သရုပ်ဆောင်ရဲမင်းပိုင် မနက်ဖြန်ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်နေ့ ည (11:45) PM အချိန်မှာ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ် Terminal. 1 ကနေ ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦးသိရတာကတော့ ပြည်တွင်းပြန်ရောက်ပြီးရင်သိုင်းသင်တန်းတခုဖွင့်မှာဖြစ်ပြီး အနုပညာ လုပ်ငန်းများ ကို ပြန်လည် လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ Zin …
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇတ်ပို့ဆုကို ပိုင်ဖြိုးသု ရရှိ
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇတ်ပို့ဆုကို ပိုင်ဖြိုးသု ရရှိ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ (မတ် ၂၃ ရက်)က ရန်ကုန်မြို့၊ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ MEP ခန်းမတွင် ကျင်းပလျက်ရှိပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး …
အကယ်ဒမီ သုံးဆုရှင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဆိုတာ? ၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်း များမှစတင်၍ ယနေ့အချိန်အထိ ထွန်းအိန္ဒြာဗို မှာ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ၌သာမက တေးဂီတလောက၌ပါ အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီး အနုပညာရှင် များထဲတွင်တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၁၉၆၆ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်တွင် ဖခင် …